Hasi Google chete - Semalt Ongororo Inokurukura Nei Tichifanira Kuvandudza Kune Zvimwe Zvimwe Zvitsva
Paunoita e-commerce, SEO ndiyo musana wekuwana vatengi munyika yose pamwe nekuwedzera kutendeuka kwevashanyi kune vatengi. Zvisinei, munzvimbo dzakawanda, tinotaura nezveGoogle chete patinenge tichitaura nezvekutsvaga injini. Vanhu vazhinji vanofanira kudzidza kuti SEO iyi pfungwa, kwete nzira, uye inogona kushandiswa kune dzakawanda zvinotsvaga injini. Chiitiko chekambani yedu chinopupurira kuti kushandisa Google chete sejini yekutsvaga kukwanisirira iko kukanganisa kwakaipisisa. Kubva pane dzakawanda mabhadhibhodhi ewebsite, injini dzekutsvaga inzira yekuwana vatengi paIndaneti, kwete yega - umzugs firma zrich. Google ndeimwe yezvinjini idzi, izvo zvinoitika kuva nezvakakura zvinotevera.
Sokutengeserana kweterevhizheni, chinonyanya kukoshesa chiri kutora vatengi munyika yose vachishandisa intaneti sevangaratidza. SEO inyanzvi yekutengeserana yemu digital iyo inobudirira zvikuru ndiyo yakakosha mashoko uye metrics yavari. Izvi zvinoreva kuti Google haisi iyo nzira chete yekushandisa mazano aya. Kubva kuongorori, google inongoratidzika nokuti ndiyo yakanyanya kutsvaga injini uye inobatanidzwa zvakakwana maererano nekushandiswa.
Nik Chaykovskiy, Mutungamiriri Mukuru weVatengi vekubudirira Semalt Digital Services, rinotsanangura kuti nei vatengesi vedikijiti vanofanira kufungisisa nzira yakatarisa kuwanda kwenjini dzinotsvaga
Kune Mimwe Mimwe Nzvimbo
Google haisi nzvimbo chete iwe unogona kunyora zvinhu zvako. Makambani makuru akaita saAribaba akadzidza izvi uye akaishandisa. Vakagadzirisa nekubudirira uye vakagadzira simba rakakura mumiti yavo..Vane simba iripo paIndaneti. Pasinei naizvozvo, mawebsite avo ane motokari yakananga isingabvi kutsvaga injini. Izvi zvinoreva kuti kushandisa Google chete kunogona kuva muganhu we SEO yako. Nemuenzaniso, munhu anogona kuenda kuAlibaba zvakananga kutsvaga chimwe chinhu chimwe nechimwe neGoogle. Kuti ushandise iyi pfungwa, unogona kushandisa:
Amazon ne eBay.
Vatengi vakawanda vanogona kusarudza zvinhu pa eBay. Iyi migwagwa haifaniri kuratidzira mitsva yekutsvaga. Munhu akanaka muchengeti wepaIndaneti anonyora zvinhu zvavo pane idzi niches zvakafanana neGoogle. Nzira dzemhando dzeZVA dzinoshanda pamawebsite awa. Semuenzaniso, zita rekugadzirwa, chifananidzo, uye tsanangudzo zvinogona kusanganisira mazwi makuru. Amazon ine zvigaro zvepamberi zvinogona kupa imwezve yekutengesa murume kutambira kuwana zvinhu zvaunotengesa.
Paunenge uchiita SEO, pane dzimwe niches unogona kushandisa kuti uende kune dzimwe misika. Semuenzaniso, vakawanda vane blogger vakawana kushandiswa kweBing ne Yahoo kuti vatore chero vatengi vese paIndaneti. Havasi vanhu vose vanotaura nezveGoogle dzemibvunzo yekutsvaga. Kubva padashboard yemabhulogi akawanda, mamwe magetsi ekutsvaga motokari anogona kuunza vamwe vatengi vanokosha.
Sekutonga, SEO zvarinotaura zvinowedzera kuGoogle. Vanhu vazhinji vanogona kushamisika kana zvakakosha kugadzirisa mawebsite eGoogle oga. Google chete haisi yega injini yekutsvaga ine simba rekubatsira nzvimbo yako. Muzviitiko zvakawanda, Google ndiyo yakanyanya kutsvaga injini. Asi zvakadaro, maonero ekutengesa ma digital anowanzo akawandisa kupfuura Google chete. Mumwe anofungidzira kunze kwekutsvaga injini paanenge achitengesa kutengesa. Izvi zvinoreva kuti SEO ndiyo pfungwa inogona kudarika pane dzakawanda nzvimbo dzepaIndaneti.